02 | October | 2021 | QEERROO
Irreechi mallattoo tokkummaa Oromoo fi ibsituu duudhaa Oromummaati.
Posted on October 2, 2021 by Qeerroo
Ijoo Dubbii Qeerroo Bilisummaa Oromoo
dursee, uummata Oromoo bal’aa kan biyya alaafi biyya keessa jirtan, kanneen mana hidhaafi dirree qabsoo jirtan Baga Ayyaana Irreechaa kan bara 2021 geessan jennee ergaa keenya isiniif dhaamu barbaanna!
Akka galmee seenaarraa hubachuun danda’amutti ayyaanni Irreechaa waggaa 3000 (kuma sadii) dura uummata Oromoo biratti kabajamaa tureera. Kana jechuun, kabajni ayyaana kanaa umurii dheeraa kan qabuufi seenaa saba Oromoo waliin walitti kan hidhatudha. Uummanni Oromoo utuu kolonii Habashaan cabee aadaafi eenyummaan isaa hin ukkaamamiin Hora Harsadee fi Laga Abbayyaatti ba’uun kabajaa turaniiru. Erga sirni mootii gonfoo kaabarraa dhufee Oromiyaa seenee garuu gosa gosaan bakka jirutti waggaa keessaa yeroo lama (Arfaasaafi Birraa) Malkaa fi Tulluutti ba’ee Irreeffata. Irreechi Malkaa (Birraa) ayyaana galateeffannaati. Bacaqii gannaa ba’anii, rooba hamaafi lolaa hamaa keessa kan nama baase Waaqa galateeffachuuf uummanni Oromoo Malkaa bu’ee marga jiidhaa qabatee Irreeffata. Akkasumas, waqtii Arfaasaa ammoo roobni nagaan akka roobu, lolaa hamaarraa akka baraaramu, arfaasaa nagaa akka qotatu uummanmi Oromoo Tulluutti ba’ee Waaqa uumaa kadhata.
Haata’u malee, bara bulchiinsa Minilik irraa kaasee ayyaanni Irreechaa kun ukkaamfamaafi dhorkamaa deeme. Mootummaa Dargii booda erga EPRDF aangootti dhufee asis Addi Bilisummaa Oromoo shororkeessaa jedhamee wayita moggaafamu namni ayyaana Irreechaa kabaju akka deeggaraa ABOtti ilaalamee Irreecha akka hin hirmaanne taasifamaa tureera.
Garuu, uummanni Oromoo Irreechi mallattoo tokkummaasaafi aadaa isaa ta’uu waan hubateef xiiqiidhaan ba’ee Irreeffachuu itti fufe. Irreeffachuu qofa utuu hin taane, uummatichi gabrummaa jala waan jiruuf aadaa isaa dhabuu hubatuudhaan Qabsoo Bilisummaaf taasifamuuf akka jabaatee itti hirmaatu bakka itti waadaa waliif seenu, bakka itti irbuu haareffatu ta’e.
Gabaabumatti, ayyaanni Irreechaa mootummaa abbaa irree Wayyaanee/EPRDF aangoorraa kaasuuf qooda olaanaa kan taphate, seenaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti yoomuu kan dagatamu miti. Waldaan Maccaa fi Tuulamaa ayyaanni Irreechaa kun akka kabajamu dhiibbaa waan taasiseef danqaan hedduu isa mudateera. Continue reading →
Oduu Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo onkoloolessa 21/2021